Tsy nandray karama intsony ny ankamaroan` ny mpiasa satria tsy afaka mandoa izany intsony ireo orinasa. Etsy ankilany, ireo “prestataires”dia efa telo volana lasa no tsy nandray izay mety ho karamany. Manamafy ireo voalaza ireo ny nambaran` ny solontenan` ny Ofisim-paritra momba ny fizahan-tany Antananarivo (Ortana) nandritra ny valandresaka niarahana taminn`ny filoha Rajoelina ny alahady alina lasa teo. “Zara raha mahavita mameno ny 10%n` ny zakany ireo hotely. 5% monja amin` ny vola mampiodina azy no miditra ho an` Antananarivo rahatoa ka 4% ho an`ny faritra. Ireo “guides touristiques” dia voatery miditra “chomage technique”.